Denizli Ski Resort oo ku duugan Caddaan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliDalxiis Denizli Ski Resort ayaa lagu duubay Caddaan
12 / 12 / 2019 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, TURKEY, TELPHER
Jannada cad Pamukkale markaa magaalada jannada labaad ee cad, Denizli Ski Center, waxay noqotay mid cad. In kasta oo ay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli dhammaystirto dhammaan diyaar garowga ay ku martigelineyso martidooda, waxaa la filayaa in dhumuc barafka uu gaarsiin doono heerkii laga rabay furitaanka xilliga barafka.
Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, oo ay hirgelisay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli iyada oo ujeedkeedu ahaa in ay noqoto xarun soo jiidasho leh oo muhiim u ah dalxiiska jiilaalka ee magaalada, ayaa caddaatay. 75 kiiloomitir oo ka fog bartamaha magaalada Tavas ee Nikfer Neighborhood 2 bin 420 altitude Bozdağ'da Denizli Ski Center ee magaalada halganka cad wuxuu abuuray farxad. Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, iyada oo la dhammaystirayo dhammaan diyaar garowga loogu talagalay martida, furitaanka xilliga barafka waxaa la rajeynayaa in uu gaaro heerka la doonayo ee dhumuc barafka. Xarunta Denizli Ski Center, oo ah xarunta ugu weyn ee barafka ee Aegean, ayaa la filayaa inay martigeliso deg deg ah ka hesho Denizli iyo gobollada ku wareegsan sannadkan, waxaana la filayaa inay martigeliso tobanaan kun oo xerood ee 13 oo dhererkeedu dhan yahay xNUMX kiiloomitir.
Dadka xiiseeya ee Ski ayaa tirinaya maalmo
Ciyaartoyda isboortiga jiilaalka ee sugaya furitaanka xilli isla marka barafku soo gaaro heerkii la rabay ayaa tirinaya maalmaha si ay ugu raaxaystaan ​​barafka iyo barafka. 13-kiloomitir dhererkiisu yahay 9 track waxaa ku jira dhammaan suurtagalnimada in hiwaayadda iyo khabiiro xirfad-yaqaanno iyo baraf-barafeyaashu ay raadinayaan. Xarumaha farsamada halkaas oo 2 lagu qaadi karo saacaddii, waxaa jira qaab-dhismeedyo bulsheed kuwaas oo buuxin doona dhammaan baahiyaha maalinlaha ah ee booqdayaasha.
Cikiltepe Ski Resort ayaa soo ceshatay caddaan
Marmaray wuxuu isu beddelay jidh iyo lafo
Ankara YHT Station wuxuu u beddelay midab buluug ah oo buluug ah
Beyazit oo ka socota Sultançiftliğine Metro
Qalabka Bamka ee Beyazit Tram Stop (Video)
Topbas, Beyazit ilaa Shehzadebaşı tram mashruuc khalad ah
Muwaadiniinta ayaa ku dhintay tareenka Beyazit
koox soo dhex maraysa